Mar 2011 Waaqomsaa
6 Responses lammii shunaa
Reply waaqni faaruu moggaasee
eebba nama badhaase
galmi hanekee masara
samii kuula sararaa
balaa bara hundarraa
Reply Waaqan yaama, waaqan yaamaa baree
ni awwaata, ni awwataa baree
Lemmoon yaama, lemmoon yaamaa baree
nii awwaata, nii awwaata baree
yaa ijaa miilaakoo siinan olee galaa
yaa dhihaa barihaa koo siinan olee galaa
Misganu Guluma Ambo University Ethiopia)
Oromoon afoolaawwan hedduu kan ittiin aadaafi seenaasaa akkasumas, eenyummaasaa afaaniinis ta’ee barreeffamaan dhalootaa dhalootatti ittiin dabarsu niqaba. Isaan keessaa
Kadhaan waaqaa isa tokkoodha. Innis yeroofi bakka adda addaatti kan raawwatu yemmuu ta’u sirna ittiin raawwatu kan mataasaa qaba. Fakkeenyaaf kadhaa waaqaa kan yeroo irreechaa taasifamu yoo ilaalle maanguddoonni marga jiituu, coqorsaafi ilillii qabataniiti kadhatu. Kunis akka aadaa Oromootti kan inni agarsiisu nageenyaafi hawwii gaarii qabaachuu isaati.
Kadhaan waaqaa caliseetuma bifa walfakkaatuun kan adeemsi famu osoo hin taane kaayyoo adeemsifamuuf (kadhatamuuf) irratti hundaa’ee gargar ta’a. Kana jechuunis kadhaan waaqaa yeroo Irreechaa taasifamuufi yeroo fuudhaafi heerumaa taasifamu garaagara ta’uusaati. Haaluma kanaan nutis akka maddoota hawaasaa keessaa argannerraatti hundaa’uun gosoota garaagaraatti qooduuf yaaleerra. Isaanis kanneen armaan gadiitti eeraman of keessatti hammatu. Kadhaa waaqaa kan Yeroo Arfaasaa duraa, Birraan bari’uu, masqalaa, irreechaa, Beelaa, Sirna Gadaa, Gumaa, Ayyaantuu, kabaja Ayyaana looniifi k.k.f eeruuf yaaleerra.
MAALUMMAA KADHAA WAAQAA
Kadhaan waaqaa wanta barbaannuufi hawwinu akkasumas, wanta dursee nuu godheefis, galata waaqaa kan ittiin galchiinu yoo ta’u, oromoon seera mataasaa kan kadhaa waaqaa ni qaba. Seerri kunis dubartiin okolee, siiqqeefi irreecha dhiirri waddeechaafi irreecha, qabachuudhaan bahanii kadhatu. Oromoon kadhaa isaa keessatti kan dursa kennuuf nagaya, roobaa fi fayyaa akka ta’e ni beekama.
Oromoon akka maatiitti walga’anii waaqa haadhaafi abbaa yookiin ayyaana isaanii yaadachuufi kadhachuudhaan nagaa fi badhaadhina maatii maraafuu akka kennu gaafata. Oromoon yeroo waaqa kadhatu gamtaadhaanis ta’ee akka maatii fi dhuunfaadhaan waaqa kan kadhatu yoo ta’u, gamtaadhaan malkaafi tulluutti bahuudhaan hongee, dhukkubnii fi waraanni yoo jiraate akka isaan baraaru kadhata. Egaa akkuma waa’ee kadhaa waaqaa ilaalchisee Oromoon akkamitti akka waaqa kadhatu, waa’ee eebbaa ilaaluunis dirqama ta’a. Sababiinsaas, kadhaan waaqaafi eebbi akka barruu harkaa keessaafi duubaatti waan ilaalamaniif. Kana jechuunis Oromoon akkuma gama rakkoo isaafi wantoota isa mudataniin waaqa kadhatu wantoota gaariifi barbaachisoo ta’an hawaasa bal’aafi yookaan nama dhuunfaaf hawwii qabu waaqni akka isaaniif guutuuf eebba ni taasisa. Walumaagalatti, kadhaan waaqaafi eebbi wal qabatanii deemu.
2. Gosoota kadhaa waaqaa
Oromoon yeroo waaqa kadhaatu haalaafi yeroo adda addaa keessatti kan taasifamuudha. Kunis gosoota gosoota adda addaa qaba.
2.1. Yeroo Arfaasaa Dura
Waqtiin kun waqtii roobni gaariin jiru qotee bulaan lafa qotee
Sanyii adda addaa facaafatuudha. Yeroo kanas akkas jedhee waaqa isaa kadhata.
Yaa waaqi cimaaddii naa camaddee kana gateettii naa jabeessi
Sangaa camadame gateettii naa jabeessi
Gabaree hordaa qabate hordaarratti naa jabeessi
Isa gindii qabate humna jabinaa laadhuufi
Humna gur’uu humna kenniifi
Kan facaafadhe gurra arfaniin na magarsi
Qaqqabsiisii naa laadhu
Horii koo nagaan bobbaasii na galchi
Kan dheedu sifaa naaf godhiifi
Ganna nagaan na baasi
Birraa adii nagaan na baasi
Maaatii fi waatii koo wajjiin
Karra koo wajjiin
Nagaa naaf kenni
Nagaan na baasi
Raafamaa fi daafamaa nurraa qabi
Nama nagaa nutti qabi
Dukkana gannaa nagaan na baasi
Sa’aa namaa nagaa naa kenni
Karra kootiifi nagaa naa kenni
Ilmoo kootiif nagaa naa godhi
Kaniin qootadhe nagaan naa laadhu.
2.2. Yeroo Birraan Bari’u
Yeroo birraan bari’u jechuunis yeroo ganna dukkana keessa darbee barii birraa ga’u waan jedhee waaqa kadhatu qaba. Innis akka armaan gadiitti.
Yaa waaqi nagaan dukkaana gannaa na baastee galata
Birraa booqaatti na baastee galata
Saani koo nagaan bahee galata
Ilmoon koo nagaan bahee galata
Kan sa’aa deemu sababa nabaasi
Kan namaa deemu sababa na baasi
Sanyii naa magarsite kana na qaqqabsiisi
Idaa arrabni fidu na baasi
Idaa ijji fidu na baasi
Idaa harki fidu na baasi
Kanin argee gojobadhe qaqqabsiisii naa laadhu
Barakaa naa godhi
Baarkii naa godhi
Maaddii naa godhii
Ijoollee koo wajjiin na nyaachisi
Ollaa gandaan nagaa naa kenni
Oromoon yeroo birraan bari’u akkuma waaqa kadhatu yeroo masqalaa jechuunis yeroo ibsaa birraa gadi baasu waan jedhee waaqa kadhatu qaba. Masqala inni jennus isaduri abbootiin ibsaa birraa jedhaniidha. Mallatoon ibsaa kanaas yeroo ganni darbu yookiin birraan bari’uu ta’uu nu agarsiisa. Kunis ganni gurraacha ta’uufi birraan ifa agarsiisa kadhaan isaa akka armaan gadiitti.
Waggaa nagaan nu geessee
Galanni sihaa go’u yaa rabbi
Kan baranaa arginee
Kan bara dhufuunis nuga’i
Bara kana bara nagaa godhi
Ibsaa nagaa nuuf taasisi
Waggaa nagaan nugeesse
Waggaan naannoftee nuu dhufte
Bara kana bara quufaa nuuf godhi
Bara kana bara nagaa nuuf godhii
Maddii maaddii nagaa nuuf godhii
Hamaa nurraa faccisi
Daraaroo keenya nuu barakachiisi
Xinnaa keenya nuu guddisi
Wallaalaa nuu beeksisi
Beekaa keenya nuu bulchi
Irreechi marga coqorsaafi ilillii jiituu mallattoo bakka nagaa
Ayyaantummaafi galata martuu dhihaatu yoo ta’uu, sabni Oromoos malkaaa, tulluufi nama gidduuttis araara buusuudhaaf harkatti qabatanii dhihaachuun beekamadha. Irreechi mallattoo araaraa kan dhiifama gaafatu, walumaagalatti, hawwii, nageenyaafi qabbana kan ittiin ibsan jechuun ni danda’ama. Kadhaan yeroo irreechaa kadhatamus:
Yaa waaq nagaan nu oolchi
Bakkee nagaa nuu godhi
Qe’ee nagaa nuuf taasisi
Biyya isa kaanis nagaa nuu godhi
Bokkuu nagaa nuuf taasisi
Caffee nagaa nuuf guddisi
Kan dhalate nuuf guddisi
Rimaa haphee nuu taasisi
Korma cirrii nuu taasisi
Dhalattuu dhalatte nuu guddisi
Dhala mandhee nuu godhi
Qoonqoo quufa nuu godhii
Nabsii bultum nuu godhi
Oromoon yennaa rreecha irreeffatu waalama of keessaa qaba.
Isaanis: yeroo birraan bari’uufi yeroo ganni dhufeedha. Innis ibsaa qabsiifatee. Marga cirateeti Kadhaan isaas kan armaan gadiiti.
Bara kana bara nagaa nuuf taasisi
Bara quufaa nuuf taasisi
Bara jireenyaa nuuf godhi
Bara gammachuu nuuf godhi
Bara argachuu nuu godhi
Bara badhaadhinaa nuuf taasisi
Bara barumsaa nuuf taasisi.
Irreechi bakka tokko tokkotti bokkuu jedhama. Bakka kaanitti immoo bishaan guddaarratti walga’anii kadhatu. Odaa jalattis ni irreeffatu. Sababni isaas odaan mallattoo eenyummaa saba Oromoo waan ta’eef.
Oromoon naannoo shawaa ennaa ganni roobu, yennaa lafti dhoqqaa’u dhaddach bokkuu ni cufa. Sababni inni dhaddacha bokkuu cufuufis, galaanni waan guutuuf, lafti waan dhoqqaa’uuf, namni waan wal hin argineef, cufa. Inni biroo ganna ganna midhaan adda addaa qotee waan facaasuuf kana sababeeffatee dhaddacha kana cufa. Dhaddachi kun yerooo inni banamus yeroo birraan bari’u ykn ibsaa waggaa har’a nuti masqala jennu. Mallattoon ibsaa kanaas yeroo ganni darbu ykn birraan bari’u nu agarsiisa. Kunis ganni gurraacha ta’uufi birraan ifa ta’uu ibsa.
Yeroo kanas seera guuttatee walwaanisiseetu tokko kootta jedhee, dhufee dubbadhu jedhee akkati dhufte nageenyi haa dhufu jedhee
Bakkalchi milkii haa ta’u
Bakkeen nagaa haa ta’u
Kan adeeme haa galu
Kan maseene haa galu
Kormi cirrii haa ta’u
Rimaan laphee haa ta’u
Barbadaan suga haa ta’u
Booruun gabbina haa ta’u
Koleen haa marmaartu
Teessuun haa mandiitu
Waaqni lolee lafti haa tolu
Irraa goruu dogoggoruu nu haa baasu
Biyyi keenya nagaa haa ta’u
Biyyen keenya nagaa haa magarsu
Gadaan biyyaa haa tolu
Gadadoon biyyaa haa badu.
Jirbii jiru nu hindabarsin
Midhaan jiruu nu hin balleessini
Bakkeen riqituu haa ta’u
Nabseen bultum haa ta’u
Jaarsi haa bulu
Dargaggeessi haa sugaa’u
Waliigaltee nuuf haa kennu
Jedhee eebbiseetu bokkuun kun banameera, guutuudha hindhangala’u. Karaa gadi- jinfuudha, guungumni hin jigsu, toshi hin balleessu guutuudh jedheetu dhaddacha isaa kana itti fufa. Irreessi kan irreeffatamu haala kanaan waggaatti ji’a tokko birraan bari’uufi ganni darbu sababa godhachuun haala kanaan mirkaneeffata. 2.5 . kadhaa yeroo Beelaa
Roobdee hin tortorsn
Caamtee hin goggoosini
Waraansa jalaa nu baasi
Dhibee hamaa nu baasi
Beela jalaa nu baasi
Yaa waaq nuu roobi
Yaa waaq nuu gorari
Uumtee nu hin balleessi ni
Mukti keenya gogee hin badin
Lafti keenya gogee hin badin
Yaa abbaa keenyaa beelaan nu hin fixin
Dhalataa keenyaa beelaa hin fixin
Rooba keessaa nuuf laadhu
Maama keessaa nuuf laadhu
Lekkee kee nuuf roobi
Nu hin balleessini
Nu hin dheebossini
Yaa waaq nu gorori
Yaa baraa abeeti
Kan waaqni godhe balleessitaa abeeti
Mee yaa baraa abeeti
Yaa waaqaa abeeti
Mee nuu gorori
Mee qabbana kee nuu buusi
Gaaddisa kee nuu buusi
Duumessa kee nuu buusi
Kan roobee tortorsi nu baasi
Kan caamee goggossu nu baasi
Dambaaraa alaa kana nuu buusi
Mee maaddii keessa nuu buusi
Mee bara kaa keessa nuu buusi
Gorora kee itti nuu tufi
Mee isuma suga nuu godhi
kadhaa yeroo sirna gadaa
Oromoon sirna ittiin bulmaataa qaba. Sirni ittiin bulmaataa kunis sirna gadaa jedhama. Gadaa kana keessatti kadhaan waaqaa gahee guddaa qaba. Innis kan adeemsifamu namoota muudamuun adeemsa sirna gadaa kana keessatti gahee qaban Abbaa gadaa jedhamuun kan gaggeeffamu yoo ta’u, akkaataan itti waaqa kan armaan gadii kana fakkaata.
Yaa waaq nagaan nu oolchitee nagaan nu bulchi
Bokkuun nagaa haa ta’u
Caffeen nagaa haa ta’u
Kan dhalate haa guddatu
Kan guddate haa beeku
Rimaan haphee haa ta’u
Dhalataafi dhalattuun haa guddattu
Dhalchee haa dhungatu
Dhalli may’ee haa ta’u
Qoonqoon quufa haa ta’u
Nabsiin bultum haa ta’u
Bakkalchi biqqii haa ta’u
Dhalamoon deetti haa ta’u
Duulli dannama haa ta’u
Dheedee haa barbadeessu
Barbadaan sifaa haa ta’u
Sifuun gabbina haa ta’u
Dhugee haa booreessu
Dhalee dil’uu haa buusu
Bokkuun nagaan ga’ee galata
Waggaan nagaan ga’ee galata
Bokkuun gamaa gamanaa nagaadha galata
Biyyi nagaadhaa galata
Mootummaan nagaadhaa galata
Inni qotattu siif haa bara katu
Inni tikfattu siif haa horu
Inni nagaa dubbatu nagaa ii haa ta’u
Balaa nu haa baasu
Yaraa nu haa baasu
Malkaan kun malkaa hin guune nuu haa ta’u
Malkaan kun malkaa hin duune haa ta’u
Inni gamaa haa ofkalu
Inni gamanaa haa ofkalu
Nabseen bultum haa taatu
Hiddi allaanduu haa ta’u
Hallayyaan dirree haa ta’u
Oolli didibbee haa ta’u
Biyyeen keenya nagaa haa magarsu
Gadaan biyyaa haa ta’u
Gadadoon biyyaa haa ba’u
Jirbii jiru nu hindaarsin
Jaarsi nuuf haa bulu
Walii galtee nuuf haa kennu
Yaa rabbii keenyaa adeemaa
Beela’aa beela baasi
Dheebotaa dheebuu baasi
Yeroo hundumaa siif sagadna
Si sodaanna si ulfeessina
Walii keenya nuuf eebbisi
Bakka nagaa nuuf taasisi
Balaa tasaa nurraa fageessi
Kan jaalatuu nu jiraachisi
Oofuu jennee siif sagannaa
Galata siif galchinaa
Yaa rabbi tokkichaa
Kadhaa keenya nuuf dhaga’i
Iddoo yaanuufi iddoo bulluun nu ga’i
Kan siif laanne nuuf sooradhu
Lubbuu keenya nuuf qusadhu
Ijoolleef nagaa kee nuuf kenni
Horii keenya nuuf eebbisi
Ayyaanni abbaa keenyaa
Ayyaanni haadha keenyaa
Nagaa nuu kenni
Hamaa nurraa qabi
Nama ganaa nutti qabi
Kan ormaa nurraa qabi
Kan keenyaan nu bulchi
Abddaariin keenya waaqni nu uumte
Daafamaa nurraa qabi
Nu eegi nu tiksi
Bakka nagaa nu oolchi
Karra keenya eegi
Bara nu baasi
Abbaa baraa nuu ta’i…..
Reply Barataa Misgaanuu !
Waan hunda dura nagaan Waaqaa si haa gahu. Akkam jirta ?
Dhaamsa kee kana tureen arge. Dafee deebii siif kennuu dhabuu keenyaaf dhiifama guddaa jechaa, barumsa nuuf qoodde kanaaf galanni kee guddaadha. Fuulduras harki kee nurraa hin gabaabbatiin!
Reply KANA BEEKTUU LAATA
Ganni tokko. kan soogaati
Jagni tokko. Diidoo Gaawoleeti
Qaroon tokko. Liiban waataati
Raagdi tokko. Areeroo Bosorooti
Mootiin Dubartii tokko.Gaattoo Saaqqooti
Fardi tokko.Boror Walee Waaccuuti
Maddi oduu Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoo
Reply Nagaan Waaqaa haa dursu!
Waaqeffannaan amantii keenya; kanaaf guddifachuutti jirra; tifkachuunis dirqama keenya ta’a. Amantii kana guddisuuf waan amantiin kun qabu beeknee, walbarsiisuun akka walhubannaan Waaqeffattoota gidduu jiraatu gochuun barbaachisaa dha. Kana irratti ka’umsa gaarii yeroo ammaa mul’achaa jiru daran gabbifachuun nutti jira.
Amantii kana guddisuuf immoo tifkachuun hojii keenya guyyuu ta’uu qaba. Namni horii tiksuuf gara dirreetti yoo yaasee bira deebi’e tiksee jira jechuu hin dandeenyu. Tiksituun gaarii kan horii tiksu san bakka dheedaniin ga’ee, yeroon obaasee, galgala immoo akka bineensi isaan hin nyaanneef mooraatti deebisee galchuu dha.
Waan keenya haa tifkannu!
Leave a Reply Cancel reply	Comment Name * Email (will not be published) * Website Please enter an answer in digits:six + 17 = Home